I-Dolphin Bay Divers Retreat Fiji - umlingo uyakuthola - I-Airbnb
I-Dolphin Bay Divers Retreat Fiji - umlingo uyakuthola
Vanua Levu, i-Fiji
Iqhugwane ibungazwe ngu-Viola
Sitholakala epulazini elidala likakhukhunathi elizungezwe ugu olunesihlabathi esimhlophe nehlathi lemvula. Ayikho imigwaqo, ayikho i-disco, ayikho i-TV - intokozo nje kuphela.Igama elithi udonga olumhlophe oludumile kanye ne-rainbow reef kusele imizuzu embalwa nje ukutshuza nokushushuluza nge-snorkeling. Yenza okuningi noma okuncane ngokuthanda kwakho. Zivumele utotoswe ebhishi lethu le-SPA, hamba ukhuphuka intaba noma ulale ku-hammock yakho bese ubuka izimfudu zidlula. Abasebenzi bethu baseFiji abanobungane, bazoqinisekisa ukuthi unakekelwa kahle. Vumela umphefumulo wakho uphumule :-)
Sicashile kakhulu engxenyeni esenyakatho yeFiji. Amaminithi ukusuka kuzo zonke izingosi zokutshuza ku-Rainbow Reef. Ukutshuza kuhle kakhulu, ukutshuza emanzini, ukuhamba ngezinyawo noma ungenzi lutho::-) kufinyeleleka ngesikebhe kuphela.
Sisendaweni encane ngqo ku-Rainbow Reef enoku-snorkeling okuhle nokutshuza,, ngaphandle kwethrekhi eshayiwe. Akukho ukungena emgwaqeni futhi kuyimfihlo kakhulu. Kukhona isitolo se-PADI dive, indawo yokudlela, ibha kanye ne-SPA emagcekeni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Vanua Levu namaphethelo